परनिर्भर देशमा समाजवादको कुरा कल्पना मात्रै : मन्त्री यादव : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
परनिर्भर देशमा समाजवादको कुरा कल्पना मात्रै : मन्त्री यादव
November 13, 2018 मा प्रकाशित
करिम बक्स मियाँ, दोहा कार्तिक २७ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादवले परनिर्भर अर्थ व्यबस्थामा चलेको देशले समाजवादको कुरा गर्नु कल्पना मात्र भएको बताएका छन्। कतारको सरकारी भ्रमणमा आएका मन्त्री यादवले यहाँ स्थित नेपाली समुदायसित अन्तरक्रिया तथा भेटघाटमा उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
समाजवाद संविधानमा लेखेर न आउने भन्दै उनले भने ‘जबसम्म आफ्नै सामर्थ्यमा जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्न समाजवादको कुरा गर्नु कोरा कल्पना हो । समानता र सम्व्रिद्दी बिना समाजवाद संभव नभएको उनले दावी गरे।
वैदेसिका रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतंत्र धानिएको भएपनि विप्रेषण नेपालको स्थायी समाधान नभएको उनको जिकिर थियो। नेपालले आँखा उपचारको क्षेत्रमा विदेसी समेतलाई सेवा दिई सकेको र अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत नेपाल क्रमिक प्रगतितर्फ बढेको उनको दावी थियो।
सबै नेपालीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गरिएको र १२ सय प्राथमिक तथा आधारभूत उपचार केंद्र निर्माणमा सरकार अग्रसर भएको उनले बताए । पूर्ववत सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य विमा देशैभरी लागू भई सकेको र विपन्न वर्गको स्वास्थ्य विमा सरकारले नै गरिदिने मंत्री यादवले बताए।
उपप्रधानमंत्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैर आवासीय नेपाली अभियानमा आफु लागेको र अबको लक्ष भनेको नेपाललाई मेडिकल टूरिज्मको गन्तव्य बनाउने बताए. नेपालीहरूले विदेशमा होइन विदेसीहरूले समेत नेपालमा बिस्वस्त उपचार गर्ने युगको लागी आफुले आभियान संचालन गरेको उनको दावी थियो।
कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई आफ्नो सुझाव राख्न नदिएको भन्दै केही युवाहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। नेपाली नियोगको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा कतारस्थित नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।